chitoro — Trip LEE
Akadhindwa ari White, 100% polyester dhayi dzesub t-hembe
Tagless netsika chidzitiro yakadhindwa kukura Tag
tsika 116 rakarukwa chitaridzi vasonanidza pamusoro pasi mupendero. Underside pamusoro chitaridzi anoverenga, “Handinyari”.
simuka – bhuku
Society rinoti wechiduku inguva kumbotamba yokuzviratidza, asi Trip Lee anoti Mwari akatidana wose kumuka kubva dzinofarira kutsumaira, pamusoro tarisiro shoma, uye kurarama nokuda Mambo amuka.
Nyika rinotitaurira kuti makore edu okutanga zvinofanira nemari yaakapiwa kunakidzwa pane vakazvipira vavariro. Tinoudzwa kuti basa uye kuzvipira ndivo mitoro anofanira kubvisa kwenguva refu sezvinobvira. uye saka, vakawanda vedu vanopedza vechidiki yedu anosuruvarisa mamiriro wekutsumwaira-vakarara upenyu kusvikira tava kumanikidzwa kusimuka. Chinetso ndechokuti upenyu vakatotanga. Zviri kuitika iye zvino. Uye Mwari akakudanirai kurarama nayo.
Mubhuku rino simba, Trip Lee anoti inguva muka uye SIMUKAI, kurarama nzira takasikwa kuti tirarame. Young kana akwegura, tanga vakadanwa kurarama iye. Pari zvino. vatendi Young vanotarisana nezvinetso zvakafanana vaKristu vakura, asi havana kunzwa navo nemamwe nzira. SIMUKAI rinotaura avo chinoumba matambudziko ari vave nechekuita, chakadzama, uye nzira kuchinja upenyu-.
Rega kungogara ikoko: SIMUKAI!
simuka – arubhamu
An Album vanogona kukudzidzisa zvizhinji. Munzira dzakawanda, zviri mukuru pachikuva wokuparadzira shoko pamwoyo, ataure kunokosha zvidzidzo, uye kupemberera upenyu zvinakidze, simba chimiro. Ndizvo chaizvo chii Trip Lee anoita pamusoro wake wechina renguva pakureba Album, “Simuka.”
Kuti uratidze mashoko ake, Trip akatora yakasiyana nzira pakunyora nguva ino kumativi. Pane kushandira pamwe vaburitsi yakawanda, Iye aishanda kuvinga yose Album pamwe kwenguva yakareba mugadziri Gawvi kwake Atlanta Studio.
Akadhindwa ari Black, 100% mhete-vakaruka donje T-shirt.
Rakadhindwa munyoro-ruoko inks, saka anodhinda dzamutswa kuti kubatwa.
Shirts vane tagless ane tsika chidzitiro rakadhindwa kukura Tag.
tsika 116 rakarukwa chitaridzi vasonanidza pasi mupendero.
Underside pamusoro chitaridzi anoverenga, 'Handinyari'.
shirt izvi vane slimmer vakatongoparadzwa. Kana haudi slimmer kukodzera zvidimbu, zvino chinoratidzwa arayire munhu kukura kukwira.
The Life Good – bhuku
zvinofadza motokari, yakakura imba, chero mwoyo wako zvishuvo. Munhu wose anoda kurarama The Life Good. Asi chii chinoitika kana zviroto vanova kurota zvinotyisa uye vimbiso rusununguko kunotungamirira kuupenyu mujeri? Chii chinoitika kana ukaona kuti zvose zviri goridhe anorasikirwa anopenya wayo? Zvichida vapfumi nevakakurumbira havasi kurarama The Life Good. Pamwe kurota kwedu dzomuShoko nhema. uye pamwe, chete zvichida vaya vane zvishoma here zvakawanda. Chii The Life Good…kwazvo?
Mubhuku rino, vanoda pashure ake acclaimed Album chechina, The Life Good, Christian Rap Artist uye munyori, Trip Lee, vanovhura chii nyika, nyama uye dhiabhorosi kusimudzira sezvo mukuru uye rinonyatsogutsa upenyu. Anobva anotsanangura chii The Good Life zvechokwadi: upenyu zvatinokwanisa uye asi mhiri chinhu ichi munyika kupfupiro. fungidzira: The Life Good. – tirera #1 – tirera #2
The Life Good – arubhamu